यात्रुको ६ लाख लिएर फरार ट्याक्सी चालक यसरी परे प्रहरी फन्दामा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
HOME » यात्रुको ६ लाख लिएर फरार ट्याक्सी चालक यसरी परे प्रहरी फन्दामा
यात्रुको ६ लाख लिएर फरार ट्याक्सी चालक यसरी परे प्रहरी फन्दामा
काठमाडौँ। यात्रुले बिर्सिएको ७ लाख ५५ हजार लिएर फरार टयाक्सी चालक पक्राउ परेका छन्। नवलपरासी कावासोती घर भई हाल काठमाडौं हाँडीगाउँ बस्दै आएका बा १ ज ३६६५ नम्बरको भाँडाको टयाक्सी चलाउने २९ वर्षीय अशोक थापालाई प्रहरीले ६ लाख नगदसहित पक्राउ गरेको हो। गत बैशाख २६ गते बुधबार बारा सिमराका ६७ वर्षीय नारायणप्रसाद पाठकले छोरा रमेश प्रसाद पाठकको काठमाडौं कमलादीमा संचालन गरेको पसलका लागि ल्याएको उक्त रकम लिएर टयाक्सी चढेका थिए। तर टयाक्सीबाट झर्दा उनले पैसाको झोला भने टयाक्सीमा मै विर्सिएका थिए।
सोही पैसा लिएर फरार भएका टयाक्सी चालकलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरीले नियन्त्रणमा लिई सो पैसा मध्ये ६ लाखसमेत बरामद गरेको हा । सीसी टिभी फुटेजका माध्यामबाट सो रकम टयाक्सी चालकले नै लिएको पुष्टि भएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सो रकम सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सम्बन्धित धनी पाठकलाई फिर्ता दिइएको छ। थापाले १ लाख ५५ हजार भने हिनामिना गरेकाले उनलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाएर आवश्यक कार्वाही प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरे लले जानकारी दिए। प्रहरीले बाँकि रकम थापाले आफूखुसी खर्च गरेको पाइएको पनि जनाएको छ।